घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू स्कटिश फुटबल खेलाडीहरू जोन म्याग्जिन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जोन म्याकजिनको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने, यो सब उसको जीवन यात्राको बारेमा छ, बाल्यकालदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीको लागि एक पालना छ - जोन म्याकजिनको बायोको एक सारांश।
हो, सबैलाई थाहा छ एस्टन विलाको आध्यात्मिक नेतासँगको उनको बलियो साझेदारीको बारे ज्याक ग्रेलाश। यस तथ्यमा पनि कि तपाईं उसलाई एक रूपमा हेर्नुहुन्छ डीन स्मिथको उद्यमी टीममा अन्डररेटेड स्टार। यस सम्मानका बावजुद हामी शर्त लगाउँछौं कि तपाईलाई उनको पूर्ण जीवन कथा थाहा छैन। हामीसँग यो छ, र थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोन म्याकजिन बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम "Meatball" लिन्छ। जोन म्याकगिनको जन्म अक्टोबर १ October 18 day को १ day औं दिनमा उनकी आमा मरियम म्याकजिन र बुबा स्टीफन म्याकगिन स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भएको थियो।
स्कटिश फुटबलर केटी नामकी बहिनीसँग जुम्ल्याहा हुन्। उहाँ children० को दशकमा देखा पर्ने आफ्ना आमा बुबा बीचको मिलनबाट जन्मेका चार बच्चाहरूमध्ये तेस्रो हुनुहुन्छ। कुनै श doubts्का छैन, उसले आफ्नो आमाबाट आफ्नो मुस्कान पायो र उसको बुवा उनको भयंकर तवरो पछाडि रहस्य हो।
जोन म्याकजिनका आमा-बुबा- स्टीफन र मेरी म्याकजिन आफ्ना छोरासँगै मनाउँछन्।
मेरी र स्टीफनले क्लाइडब्याकमा जोन म्याकजिनसँगै दुई जना ठूला भाइ र जुम्ल्याहा बहिनीहरूलाई हुर्काए। त्यतिखेर, आउँदै गरेको भिल्ला व्यक्ति आफ्ना जेठो भाई, स्टिफन र पॉलसँग फुटबल खेल्न रमाईलो गर्थे। भविष्यमा के भयो भन्नेमा उसले कम ध्यान दिएन, हुनसक्छ, के खान पर्छ।
पेटको कुरा गर्दा सम्भवतः जोन म्याकजिनले एक पटक खानाको साथ अविभाज्य बन्धन साझेदारी गरेका थिए। उसलाई दिनभरि चम्चा बोक्न मन पर्थ्यो - खानाको थोरै अवसरको नाममा। धन्यबाद, उसको बचपन एक्लोपनाबाट मुक्त हुन सकेन किनकि उसको परिवारले उसको आवश्यकता पूरा गर्यो।
जोन म्याग्जिन परिवार पृष्ठभूमि:
जस्तै किरेर टिर्ने, आरामदायी परिवारमा हुर्कदै गर्दा सानो केटालाई चाहिने सम्पूर्ण लक्जरी युवालाई सँभाल्यो। आदर्श रूपमा, जोन म्याकजिनको पारिवारिक पृष्ठभूमि फुटबलको साथ एक ट्र्याक रेकर्ड हो। के तपाईंलाई थाहा छ? ... उनको हजुरबुबा (ज्याक म्याकगिन) स्कटिश फुटबल संघको अध्यक्षको रूपमा सेवा गर्थे।
हुनसक्छ उनका हजुरबा हजुरआमाले पाएको प्रभाव पहिलो पाइला हो जसले खेलकुदमा उनको मार्गलाई सहज बनायो।
जोन म्याग्जिन परिवार मूल:
के तपाईंलाई थाहा छ? ... जोन म्याकगिनको गृहनगर क्लाइडब्यांक ग्लासगोमा अवस्थित छ, स्कटल्याण्डको सब भन्दा अधिक जनसंख्या भएको शहर र बेलायतको पाँचौं सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहर। मैले यो जीवनी बताउँदा पर्यटकहरूले यस शहरको सुन्दर ढाँचा र समृद्ध संस्कृतिका कारण उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।
चीजहरूको फुटबल पक्षमा लिभरपुल जस्ता किंवदन्तीहरू एन्ड्रयू रबर्ट्ससन उनीहरूको खेल सम्पदाको स्वाद पाउँदा ग्लासवेगियन्सलाई धन्यको महसुस भएको छ।
जोन म्याकजिन अनटोल्ड स्टोरी:
सुरुबाट, उनका आमाबुवाले उनीहरूको लागि फुटबलमा मार्ग व्यवस्थित गरिसकेका थिए। आफ्नो जेठो भाई स्टीफन र पावलको पाइला पछ्याउँदै सानो जोनले एकदमै कोमल उमेरमा स्कटल्याण्डको सेन्ट मिरेन एकेडेमीमा प्रवेश गरे।
पछिल्ला दिनमा, सानो सानो कडा र सीपको कारणले सानो बालक सधैं पिचमा देखिन्थ्यो। सानो म्याग्गीन एक पूर्वानुमान वाला व्हिज बच्चाले सजिलैसँग ठूला ठूला बच्चाहरू चलाउन सक्दछ।
उनले पास विपक्षी चालको तरीका देखेर मान्छे सोच्न थाले कि लाड सफल हुनेछ। दर्शनलाई अभ्यासमा राख्न, जोन म्याकजिनका अभिभावकहरूले एकेडेमी समय सारिणीहरू भन्दा टाढा स्थिरता सुनिश्चित गर्न आफ्नो भूमिका खेले।
त्यतिखेर, यदि उनी सेन्ट मिरेन फुटबल खेलाडीमा नभएको भए, म्याकजिन प्रत्येक बच्चाहरूको फुटबल कार्यक्रममा भाग लिने थिए। उनले जन्मदिनको स्मारक खेलहरूमा भाग लिए। तपाईं यहाँ दस वर्ष पुरानो भेट्टाउन सक्नुहुन्छ?
उनको बाल्यकाल क्लबमा जीवन सुरू गर्नु उनको विकासको लागि उत्तम सम्भव जग बसाल्यो। थप विकासको लागि, उनका आमाबुबाले राल्स्टन एकेडेमी नाम गरेको क्लबको युवा शाखामा स्थानान्तरण गर्न अनुमोदन गर्नुभयो। यहाँ हाम्रो खुशीयाली केटा केहि समय मा छैन, बसिरहेको संकेत देखायो। तपाईं अझै पनि उचाइ मा धेरै छोटो देख्नुहुन्छ, म्याकजिन वर्ष पछि बढ्न शुरू भयो।
जस्तो प्रकृतिमा यो हुन्छ, उसले आफूले चाहेको कुरा पायो height आफ्नो अकादमी वर्षहरूमा उचाई र उत्कृष्ट प्रदर्शन। सेन्ट मिरेनको पहिलो टीम (२०१२-१– सत्रको प्रि-सिजनमा) ब्रेक एक सकारात्मक नोटबाट सुरू भयो। विश्वास गरिएको रूपमा, युवा स्कटले अण्डर -२० टीमलाई म्याच बल पुरस्कार जित्ने धेरै जीतहरूमा सहयोग पुर्‍यायो।
जोन म्याग्जिनको बायो - फेम कथा फेड:
पदको माध्यमबाट उदय गर्दै, मिडफिल्ड इञ्जिनले २०१२ मा सेन्ट मिरेनसँग years बर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। दुर्भाग्यवश, क्लबसँग उनका दिनहरू खरायो नोटमा समाप्त भए किनकि स्टिभन थॉम्पसनले सेन्ट मिरेनका कप्तानको विफल शरारतमा उनी घाइते भए।
भारी हृदयले, जोन म्याकजिनका अभिभावकले हस्तक्षेप गरे। स्तिफनसले आफ्नो परीक्षाको चरणमा कदम पारे र सेन्ट मिरेनको बिरूद्ध कानुनी कारबाही गरे। जोन म्याकजिनको परिवारले केस जित्यो कि भनेर हामी सचेत छैनौं। तर एउटा कुरा भने पक्का थियो, उनले संतहरू छोडे।
मिडफिल्डरले आफ्नो सपनालाई नत्यागेको मिडफिल्डरले २०१4मा एडिनबर्गको क्लब हिबर्नियनसँग-बर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। त्यहाँ उनी ११ the वर्ष पछि २०१ Scottish-१ Scottish स्कटिश कप जित्ने टीमको हिस्सा भए।
जोन म्याकजिनको जीवनी - सफलता कहानी:
हिब्समा सामेल हुनु स्कटको लागि उत्कृष्ट विकल्प देखिन्थ्यो जसले छिटै आफूलाई मिडफील्डमा एक शक्तिशाली शक्तिको रूपमा स्थापित गरे। अवश्य पनि, उहाँको अतुलनीय प्रतिभाले धेरै प्रस्तावहरू आकर्षित गर्‍यो, बाट पनि ब्रेंडन रोडर्स'सेल्टिक। चासोको बाबजुद, म्याकजिनले विश्वास गरे कि उनले एस्टोन भिल्लासँग बढी हासिल गर्न सक्नेछन्, जुन उनले यस प्रमाणमा गरे।
भिलामा, उनी एक मिडफिल्ड जनरल बने, जसले धेरै आपूर्ति सुनिश्चित गरे ओली वाटकिन्स'र उत्तम कभर-अप को लागी Tyrone Mings.
उसको क्यारियरको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको त्यो हो जब उसले आफ्ना बाबुआमा, भाईबहिनी र देशका मान्छेहरूको अनुहारमा राष्ट्रिय मुस्कान हाल्थ्यो। जोन नायकहरू मध्येका थिए जसले सहयोग गरे स्कटल्यान्ड यूरो २०२० को लागि योग्य हुन्छ पेनल्टीमा सर्बियालाई हराएपछि।
यदि तपाईं अझै उनलाई अन्डर-रेटेड कल गर्नुहुन्छ, मात्र भिडियो हाइलाइट हेर्नुहोस् र मानसिकता परिवर्तन गर्नुहोस्। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
जोन म्याकजिन सम्बन्ध जीवन: प्रेमिका / पत्नी:
हो, उसले पिचमा भर्चुसो प्रदर्शन कायम राख्न तान्छ। मीटबलले एक सफल सम्बन्धको पोषण पनि गरेको छ। म्याकजिन साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्कट म्याकटमिनले जस्तै फुटबल-पहिले-प्रेम दृष्टिकोणमा विश्वास गर्दैनन्। मैले यो बायो कम्पोज गरेको रूपमा, प्रेमी केटाले सक्रिय रूपमा आफ्नो दीर्घ-अवधि प्रेमिका - सारा स्टोक्स डेट गर्दै छ।
जोन म्याकगिनको पत्नी बन्ने सेटमा रहेको प्रेमिका उनको पुरुषको उपलब्धिमा गहिरो प्रेम गर्दैछन्। एक पतिको रूपमा, क्लाइडेब्याक मूलले सुनिश्चित गर्दछ कि ऊ हराएको समयको लागि मेकअप गर्दछ जब ऊ फुटबलको कर्तव्यहरुबाट बाहिर हुन्छ। अब यहाँ यस्तो कार्यमा राख्नुको स्पष्ट मामला छ।
जोन म्याकजिन को हो? … लिभरपूलको बिरूद्ध goals गोलहरू पुर्‍याउने मध्ये एकका रूपमा उनलाई चिन्ने बाहिर, रेडहरूलाई बनाउने years 57 बर्षमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो पराजय हो.
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, ऊ त्यस्तो हो जो तुला राशिका विशेषताहरूको मिश्रण हो। म्याग्जिन चतुर, निर्णायक, प्लाटोनिक र एक प्राकृतिक शान्ति निर्माता हो। वास्तवमा, उहाँसँग बिताएको केही क्षणहरू मात्र तपाईंलाई उहाँको मिलनसार व्यक्तित्वको नशामा डुबाउन सक्छ।
हामीलाई यो रोचक लाग्छ कि म्याकजिनले आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म पोखरी र समुद्री तटमा समय बिताउन मन पराउँछन्। यसले प्रकृतिको लागि उसको आँखा छ भनेर देखाउँछ। उसले न केवल फुटबलमा शान्ति पाउँदछ, तर उसले अझै पनि प्राकृतिक घटनाको सुन्दरताको मूल्यांकन गर्ने बानी विकास गरेको छ।
जोन म्याकजिन जीवनशैली:
जस्तै गल्फ क्लबहरूमा केहि पैसा खर्च गर्दै रयान फ्रेजर धेरै पाउन्ड कमाउने स्कटिश प्लेयरका लागि समस्या हुनु हुँदैन। यद्यपि लामो परिवारले परिवारका सदस्यहरूसँग मनोरन्जन पार्कहरू भ्रमण गर्दा अथाह आनन्द मनाउँदछन्।
एक खेलाडी को लागि लगभग £ १.1.3 मिलियन प्रति वर्ष कमाउने को लागी, हामीलाई कुनै soothsayer आवश्यक छैन विदेशी कार र एक सुविधाजनक घर किन्न बर्दास्त गर्न सक्दैन भन्न भन्न। सत्य कुरा के हो भने, जोन म्याकजिनको worth .7.6.० मिलियन डलरको कुल सम्पत्तिले उनलाई अन्य कम्प्युटरमध्ये एक सब कम्प्याक्ट लक्जरी क्रसओभर एसयूवी - अडी क्यू afford किन्न सहयोग पुर्‍याएको छ।
जोन म्याग्जिन परिवार जीवन:
फुटबल सधैं उनको खुशी को एक मात्र स्रोत भएको छैन। म्याग्गीनले मद्दत गर्न सक्दैन तर उसको मुटुको सामग्रीमा हाँस्न सक्दछ जब उहाँ आफ्नो परिवारसँग हुनुहुन्छ जो उनको उत्प्रेरणाको प्रमुख स्रोत हुन्। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उनको हंसमुख घरको प्रत्येक सदस्यको बारेमा तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
जोन म्याकजिनका बुबाका बारे:
यदि त्यहाँ एक व्यक्ति छ जसले खेलमा आशिष्‌ पाएको महसुस गर्छ भने, यो उसको स्तिफनस, उनका बुबा हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ कि तीनजना पेशेवर फुटबलरहरू एकसाथ हुर्काउन यो सजिलो हुँदैन, तर एक मेहनती स्टिभले यो गर्‍यो।
जब म यो बायो लेख्छु, म्याकजिनका बुबाले उनको .० औं जन्मदिन मनाउनुभयो। पक्कै पनि, उसको आनन्दलाई कुनै सीमा नै थाहा छैन किनकि तिनीहरूका बच्चाहरूले उनीहरूको क्यारियर प्रयासहरूमा उत्कृष्टता कायम राख्छन्।
जोन म्याकजिनकी आमाको बारेमा:
यो अक्सर भनिन्छ, प्रत्येक सफल पुरुषको पछाडि, एक महिला छन - केवल यो समय, म्याकजिनकी आमाले क्रेडिट पायो। उनको नाम मरियम म्याकजिन हो, र उनी मीटबल, केटी र उनका ठूला भाइहरू स्टीफन जूनियर र पॉलकी आमा हुन्।
निस्सन्देह, फुटबलको संसार उनको फुटबल छोराहरूलाई यति राम्ररी हुर्काएकोमा प्रशंसनीय छ। मेरीलाई धन्यवाद, स्कटल्याण्डले अब जोन म्याकजिनको निःस्वार्थ सेवाहरूको आनन्द उठाए। स्पष्टतः उनी प्रायः आफ्ना छोरालाई किनारबाट आउँछन्।
जोन म्याकजिनका भाइबहिनीहरूको बारेमा:
यो दुबै ग्रिन्स हो, समस्या डबल गर्नुहोस्, र गिगल्सलाई डबल गर्नुहोस् यदि तपाईं जुम्ल्याहा बच्चाहरूको साथ हुनुहुन्छ भने। इमानदारीपूर्वक, म्याकजिनले आफ्नो जुम्ल्याहा बहिनी, केटीसँग धेरै चुनौतीपूर्ण अभियानहरूको आनन्द उठाए। अपेक्षित रूपमा, ती दुई भाइबहिनी प्रायः सँगै हुन्छन् र एक अर्कालाई हेरिरहेका छन् किनभने तिनीहरू बच्चाहरू थिए।
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, म्याकजिनका दुई ठूला भाइहरू पनि थिए जसको नाम स्तिफनस र पावल पनि थिए। उनका ठूला भाई / बहिनीहरू पनि पेशेवर फुटबलरहरू हुन् जसले सेन्ट मिरेनमा खेलेका थिए म्याकजिनले क्लबमा सम्मिलित हुने सुअवसर पाउनु अघि नै। सबै भाइहरूसँग तुलना गर्दा यो स्पष्ट छ कि जोन म्याकजिन परिवारका लागि रोटी दिने व्यक्ति हुन्।
उनका आफन्तहरूका बारे:
म्याग्जिनको परिवारले आफ्नो जन्मभन्दा पहिले नै खेलसँग सजिलो अनुभवको आनन्द उठाएको छ। यसको कारण यो हो कि उनका हजुरबुबा ज्याक म्याकगिनले एक पटक सेल्टिकको अध्यक्ष र स्कटिश फुटबल संघको अध्यक्षको रूपमा सेवा गरेका थिए।
आफ्नो जीवन्त परिवारका सदस्यहरू बाहेक, म्याग्जिनले एक भतिजा र भतिजीलाई चित्रित गरे। ऊ काका हुनमा गर्व छ - यसमा कुनै श .्का छैन।
जोन म्याकजिन अनटोल्ड तथ्यहरू:
लामो शट लिनेको जीवन कहानी गोल गर्न, यहाँ केहि वास्तविकताहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको संस्मरणको पूर्ण समझ प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: कुनै रमाईलो कार शरारत:
दुर्भाग्यवस, उनका धेरै गैर-समर्पित प्रशंसकहरूले आफ्ना जोन म्याकजिनको टाउकोको खिल्ली उडाउन मन पराउँछन्। केहि चिच्याउनेछ "विशाल हेड!" तिनीहरूले स्कटिश फुटबल उन्मत्त पत्ता रूपमा। यदि यो पर्याप्त भएन भने, केही अज्ञात व्यक्तिहरू एक पटक जोन म्याकजिनको कार नम्बर प्लेटमा शिलालेख फिक्स गरिएको थियो जसले उनको खिल्ली उडाउन खोजेको थियो।
Lifebogger मा हाम्रो टीमले सावधानीपूर्वक म्याकजिनको आम्दानीको मूल्या .्कन गरेको छ। हाम्रो अनुसन्धानबाट हामीले महसुस गर्‍यौं कि एक औसत स्कटिश नागरिकले एक बर्ष काम गर्नुपर्नेछ जुन म्याग्जिनले एक महिनामा प्राप्त गर्दछ।
प्रति वर्ष £ 1,302,000
प्रति महिना £ 108,500
प्रति दिन £ 3,571
प्रति घण्टा £ 149
प्रति मिनेट £ 2.5
प्रति सेकेन्ड £ 0.04
हामीले रणनीतिक रूपमा ला Pas्ग पासरको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो जोन म्याग्जिनको बायो, यो उसले कमाएको हो।
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, उनका प्रशंसकहरू प्रायः उसलाई टाउकोको आकारको कारणले गिल्ला गर्छन्। त्यस्तै, उनको उपनाम (मीटबल) ले पनि आफ्नो टाउकोको संरचनासँग सम्बन्धित छ। एकचोटि, एक old बर्षे केटाले मानिससँग उसलाई मीटबल किन दिए भनेर सोधेर उनीकहाँ आयो। यूहन्नाले जवाफ दिए…
“जब म १AS थिएँ, मेरी आमाले मेरो केशलाई काट्नुभयो। पछि, सबैजनाले मेरो टाउको फेला पारिदिए जुन मैले माटबललाई मन परेको थियो। "
तथ्य # १: जोन म्याग्जिन ट्याटू:
त्यहाँ धेरै प्रशंसकहरू छन् जसले स्कटिश प्लेयरलाई मसीको संसारमा डुबाउन मन पराउँछन्। यद्यपि म्याकजिन ट्याटूमा चासो राख्दैनन्। केही ट्याटु प्रेमीहरूले एक पटक म्याकजिनको चित्रलाई मसीमा सम्पादन गरे भने। आफैलाई हेर्नुहोस् कसरी विला पावरहाउस ट्याटू शरीरसँग देखिन्छ।
तथ्य # १: गरीब फिफा स्थिति:
र सबैभन्दा पहिला, उसको समग्र मूल्या .्कनले ऊ अन्डररेट भइरहेको छ भनेर देखाउँदछ। चीजहरू नराम्रो बनाउनको लागि, उसले of० को सम्भावित रेटिंग (स point्गी स्कटिश खेलाडी भन्दा point बिन्दु, बिली गिलमौर), को बारेमा घर लेख्न केहि पनि छैन। सत्य बोल्नको लागि, एस्टन भिल्लाको पावरहाउस उसको समग्र मूल्या rating्कनको लागि over० भन्दा बढी र सम्भावित पक्षको लागि around 80 भन्दा माथिको योग्य छ।
तथ्य # १: अर्जेन्टिना उत्पत्ति:
अक्टुबर २०१round को आसपास, जोनले आफ्नो इन्स्टाग्राम फ्यानहरूलाई अर्जेन्टिना युवा टीमको लागि विशेषताका पुराना यादहरू पल्ट एक खुलासा गरे। जोन म्याकजिनका कुनै पनि आमाबुवाको दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध छ कि छैन भनेर सोच्न यसले हाम्रा धेरै अनुयायीहरूलाई अचम्ममा राख्यो। होशियार अनुसन्धान पछि हामीले कुनै पैतृक सम्बन्ध भेट्टाएनौं।
आफ्नो जीवनको कथाको कुनै समय, म्याग्जिनले आफ्नो परिवार, विशेष गरी स्तिफन (उसको बुवा) को समर्थनका लागि नभएको भए ठूलो उपलब्धी रेकर्ड गर्ने थिएनन्। उसका अभिभावकलाई धन्यवाद, आइकनिक ईन्जिन अब बिच बीसीसीको सूचीमा पनि छन् प्रिमियर लिगका शीर्ष १० खेलाडीहरू.
जोन म्याकजिनको जीवन इतिहासले हामीलाई यो तथ्य बुझ्न मद्दत गर्दछ कि यदि तपाईं एक राम्रो उदाहरण सेट गर्नुभयो भने, त्यहाँ धेरै नियमहरू तय गर्ने बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। उसको परिवारका सदस्यहरू - जसले उनी अघि जैक, स्टीफन, र पावल जस्ता फुटबल खेल्छन् भनेर उदाहरण दिए।
कुनै श doubts्का छैन, उसका भाइहरूले पनि फुटबल मा स्टारडम गर्न को आफ्नो अप्रत्याशित वृद्धि योगदान गरेको छ। सँगसँगै उसको असाधारण खेल शैलीको बावजुद ज्याक ग्रेलाश, धेरै प्रशंसकहरु तथ्य लाई तर्क गरे कि यस दुबै अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य मा एक विरोधाभासी अनुभव छ.
जोन म्याकजिनको बायो पढ्नका लागि धन्यबाद। याद गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई तपाईका सब भन्दा सम्मानित फुटबल खेलाडीहरूको बाल्यकालको कथाहरू प्रदान गर्ने दिशामा प्रयास गर्दछौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ केहि लेख फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो लेखमा सही देखिदैन। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा स्कटिश फुटबलरको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस्।
जोन म्याकजिनको बारेमा द्रुत जानकारीको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस् जुन उनको जीवनीको सारांश दिन्छ।
पुरा नाम: जॉन मैकगिन
जन्मस्थान: ग्लासगो, स्कटल्याण्ड
पिता: स्टीफन म्याकजिन
आमा: मेरी म्याकजिन
Siblings: स्टीफन र पल म्याकजिन (जेठा भाइहरू)
केटी म्याकजिन (जुम्ल्याहा बहिनी)
प्रेमिका / पति / पत्नी: सारा स्टोक्स
वार्षिक वेतन: पाउन्ड 1.3 मिलियन
नेट मूल्य: £ 7.6 लाख
उचाइ: 1.78 मीटर (5 फुट 10 मा)